Linn Ko: March 2013
Code တောင်းစရာမလိုတယ့် Viber (Android)
Viber ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းလိုလို သိပြီးသားပါ... Viber ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Viber Account ကို
တောင်းရပါတယ်... အဲ့ဒီအခါမှာ Code ကိုတောင်းလို့ ရမှ Viber ကို သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.... အဲ့ဒီ Code
ကိုတောင်းလို့ မရလို့ ရက်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခခံပြီး နေ့မနား ညမအား ကြိုးစား တောင်းရတယ့် အကြိမ်တွေ
Posted by Linn Ko at 12:05 PM No comments:
TuneUp Ultility 2013 Full
မိမိ ကွန်ပြူတာ System ကို မြန်စေချင်တယ့် အခါမှာ အလွန်အသုံးဝင်တယ့် Software ကောင်းလေးပါ...
အသုံးမလိုတယ့် Application တွေ Windows ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Run နေခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီ Software
လေးနဲ့ နောက်ထပ် မ Run ရအောင် Disable လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်... Windows ကို မြန်မြန်လေး
Posted by Linn Ko at 3:28 PM No comments:
Software လေးတွေကို Free Download ဆွဲနိုင်ဖို့...
Software လေးတွေ ကို Free Download ရယူနိုင်ဖို့ Link လေးတွေပါ.... ဒီ Site လေးတွေက Software
တွေလည်း စုံပြီးတော့ Free Download လည်း ရယူနိုင်ပါတယ်... ရှာနိုင်သလောက်ကိုအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ် ....အာမခံတယ်ဗျာ ... ကိုယ်လိုချင်တာကို Link တစ်ခုမှာ မတွေ့ရင် နောက်တစ်ခုမှာထပ်တော့ ကြိုးစား ရှာကြည့်ဦးနော်... Link တွေကတော့.....
Posted by Linn Ko at 6:15 PM No comments:
Proxy ကျော်ရန်... (Proxy Service Server)
အတော် များများကတော့ Proxy ကျော်ရမယ်ဆို လိုချင်ကြပါတယ်... အများအားဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက
သူတွေ ပိုများမယ် ထင်ပါတယ်... Burn ထားတယ့် Site တွေ များလို့လေ... အဲ့ဒါလေးတွေ အဆင်ပြေအောင် လှိုင်ခေါင်းလေးတွေ ရှာကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.... အခု အောက်က
Posted by Linn Ko at 11:35 AM No comments:
MySQL and Apache HTTP Server for Developer
MySQL နဲ့ Apache လေ့လာသူတွေအတွက် လိုရမယ်ရ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ.... အသုံးပြုလိုသူတွေ
အောက်က Link တွေမှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်....
Posted by Linn Ko at 2:06 PM No comments:
Samsung Firmware လေးတွေပါ... လိုအပ်တယ့် သူတွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Download လုပ်နိုင်အောင် Link ကောင်းကောင်းလေးတွေ ထည့်ပေးထားတာပါ... Mediafire Link တွေချည်းပါပဲ
အောက်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် ဗျား... Password လိုအပ်လာခဲ့ရင် MMAS (စာလုံးအားလုံး အကြီး) ကိုထည့်ပေးပါလို့.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ.....
Posted by Linn Ko at 2:37 PM9comments:
Default Router Admin Password and IP Address
Router တွေရဲ့ Default Admin Password နဲ့ IP Address တွေကို ကြည့်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးလိုက်
တာပါ.... Website လမ်းညွှန်သက်သက် ပါဗျာ
တွေမှာ သွားပြီးတော့ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ....
Antivirus အလုပ် လုပ်သလား မလုပ်ဖူးလား သိချင်ရင်
ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ Antivirus က အလုပ် လုပ်လား မလုပ်လား စစ်ကြည့်ရအောင်... အရင်ဆုံး Desktop
မှာ Text File တစ်ခု အသစ် ဆောက်လိုက်ပါ... အဲ့ဒီ Text File လေးမှာ အောက်က စာကို Copy ကူးပြီး
ထည့်လိုက်ပါ... ပြီးရင် Save လိုက်ပါ.... သင် တင်ထားတယ့် Antivirus Software လေးနဲ့ အဲ့ဒီ
Posted by Linn Ko at 12:19 PM No comments:
Windows 8 Gtalk Error
Internet Options ကို အရင်ဆုံး သွားလိုက်ပါ.... Internet Explore ကနေ သွားလည်းရပါတယ်.. Command prompt ကနေ inetcpl.cpl လို့ ရိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်....
အဲဒီမှာ General, Security, Privacy, Content, Connections, Programs, Advanced ဆိုတဲ့ Tab တွေ ရှိတယ် Advanced ဆိုတဲ့ Tab ကို ရွေးပါ... Reset ဆိုတဲ့ Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Gtalk မှာ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာစာ ပြဿနာ အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 11:56 AM No comments:
Myanmar Font For Nokia N9 (MeeGo OS)
အရင်ကတော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးဗျ... တစ်ရက်လည်း ရောက်ကော အစ်ကို တစ်ယောက်က
ပြောတယ်ဗျ... သူ့ဖုန်းက Nokia N9 တယ့် ...မြန်မာစာ ထည့်လို့ရတယ် တဲ့... ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်း ရှာကြံ ကြည့်ရင်းကနေ တွေ့တာဗျ... Nokia N9 ကို မြန်မာစာ ထည့်နည်းလေးပါ... Nokia က
Posted by Linn Ko at 11:46 AM6comments:
Internet Download Manager 6.15 ပါ... သုံးဖူးသမျှထဲတော့ အကောင်းဆုံးပဲဗျ... အသစ်ကို Full Version တွေ့လို့ အခုမှ တင်ပေးလိုက်တာဗျ... အခုဟာကတော့ အတော် အဆင်ပြေတယ်....
Video ဖိုင်တွေ ရှိတယ့် လင့်တွေကို ဖွင့်လိုက်ရင်လဲ သူက တစ်ခါတည်း Download ခလုတ်လေး
Posted by Linn Ko at 12:06 PM No comments:
Free Download Manager လေးပါ...ကျွန်တော်လဲ သေချာတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဗျ.... သုံးကြည့်
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာ ပါ...
ဒီက နေလဲ ဆွဲလို့ရတယ်နော်...
Posted by Linn Ko at 10:50 AM No comments:
File Splitter Collection
ဖိုင်တွေ အရမ်းကြီးနေရင် တစ်ခါတစ်လေ သယ်ရခက်ပါတယ်... ဥပမာ.. FAT32 Format နဲ့ USB Stick
က4GB ထက် ကြီးတယ့် ဖိုင်ဆိုရင် သူ့ထဲကို သွင်းလို့မရဘူးဗျ.... အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ဖိုင်တွေကို ဖြတ်ပြီး ယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲ... ဘယ်လို ဖြတ်မလဲဆိုတော့ အခု ကျွန်တော် ပေးတယ့် File
Posted by Linn Ko at 2:12 PM No comments:
CheatBook Issue 03/2013
CheatBook Issue 03/2013 ပါ... ဂိမ်းကစားတယ့် အခါမှာ ဂိမ်းတော့ ရဲ့ အခန်းတွေကို ကျော်ချင်တာမျိုး
ပိုက်ဆံတွေ ပိုများချင်တာမျိုး ရှင်းရှင်းပြောရရင် ခိုးဆော့ချင်တယ့် အခါပေါ့နော်... သုံးနိုင်ပါတယ်....
သူကတော့ ခိုးနည်းတွေ စုထားတာပေါ့နော်... သုံးကြည့်ပေါ့...
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာ ပါ....
ဒီလင့် အဆင်မပြေရင် ဒီက ဆွဲနိုင်ပါတယ်....
Posted by Linn Ko at 12:59 PM No comments:
GPU-Z (Graphic Tester)
သင့် ကွန်ပြူတာမှာ ရှိတယ့် Graphic ရဲ့ အသေးစိတ် Detail တွေကို သိချင်ရင် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်...
သူ့ကို Download ဆွဲပြီးရင် Run လိုက်ရုံပါပဲ....သူက သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိတယ့် Detail တွေကို
အသေးစိတ် ဖော်ပြသွားမှာပါ...အခု နောက်ဆုံး ထွက်ထားတယ့် ဟာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာ နှိပ်ပါ...
Password တောင်းရင်တော့ linnko ပေါ့..
Posted by Linn Ko at 12:12 PM No comments:
iPhone,iPad iOS 6.1.2 Jailbreak Tool
ဒါကတော့ iOS 6.1.2 Version နဲ့ iPad, iPhone တွေကို Jailbreak Tool ပါ....Jailbreak လုပ်ပြီး
ပျော်နိုင်ကြပါစေ...လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်...One Click ပါပဲ...iOS 6.1.2 တော့ဖြစ်ရပါမယ်....
မဖြစ်သေးရင်တော့ မြှင့်ပေးပါ... Jailbreak မလုပ်ခင်တော့ Backup ယူထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ...
(Firmware မြှင့်ထားလျှင် Activate လုပ်ပါ) iTunes နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Backup ယူပါ...iPhone or iPad ကိုဖွင့်ပြီး ကြိုးနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ချိတ်လိုက်ပါ...ပြီးရင် ကျွန်တော်ပေးတယ့် evasi0nလေးကို Run လိုက်ပါ.... သူ့ကို Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး...ခဏစောင့်ပါ ဘာမှ မနှိပ်ပါနဲ့...ဖုန်းမှာပေါ်လာတယ့် သူ့ရဲ့ Icon လေးကို တစ်ချက်နှိပ်ဖို့ စာတစ်ကြောင်းတတ်လာပါလိမ့်မယ်...အဲ့ဒါဆိုရင် ဖုန်းကို အရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ...သူ့ Icon လေးကို ရှာပါ...တစ်ချက် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ...သူ့ဟာသူ ဆက်သွားပါလိမ့်
မယ်..ပြီးသွားရင် ဖုန်း Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်....ပြန်တတ်လာရင် ကြည့်လိုက်ပါ...ဖုန်းမှာ Cydia
evisi0n လိုချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ...
Password တောင်းရင် linnko13 လို့ ထည့်ပေးပါ....
Source ထည့်ချင်သူတွေ အတွက် ကျွန်တော်သိတယ့် Source လေးတွေ ပြန် Share ပေးပါမယ်
Cydia/Manage/Sources ထဲကိုဝင်ပါ....Edit ကိုနှိပ်ပါ... Add ကိုနှိပ်ပါ...(Internet Connection တော့
Themes ထည့်လို့ရတယ့် Sources လေးတွေကတော့
Posted by Linn Ko at 2:51 PM No comments:
EXE File လေးတွေကို ထည့်ထားတယ့် Icon လေးတွေ ရှိပါတယ်....အဲ့ဒီ Icon လေးတွေကို ကိုယ်ပြောင်းချင်တာ ပြောင်းလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ....စမ်းကြည့်လိုက်ပါ...အဆင်ပြေကြဖို့
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် နှစ်မျိုးတင်ပေးထားပါတယ်....အာက်မှာ ရယူပါ..
Posted by Linn Ko at 1:32 PM No comments:
Batch File Programming နဲ့ ကွန်ပြူတာ သမား အချို့ကတော့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ...အဲ့ဒီလို ရေးတယ့်
အခါမှာ ကိုယ်ရေးထားတယ့် Code တွေကို မသိစေချင်သူတွေ အတွက် ပါ...Batch ဖိုင်လေးကို EXE
ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းပေးမယ့် Software လေးပါ....အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်..ဖိုင် ဆိုဒ်ကလည်း သေး
Posted by Linn Ko at 12:40 PM No comments:
Screen Shot Tools (Snipping Tool)
ဖိုင်လေးက သေးသေးလေးပါ...Windows7နဲ့ Windows 8 မှာ ပါတယ့် Snipping Tool ကို တစ်ခေါက် ဖော်ပြခဲ့ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်...အခုကတော့ ရှာရခက်တယ့် သူတွေ အတွက် Shortcut သဘောမျိုး လုပ်ပေးထားတာပါ....Batch ဖိုင် နည်းနည်း ပါးပါး ရေးတတ်တယ့် သူတွေ
RegSeeker 2.4 Build 1209
Maintenance tools areamust have nowadays, getting into account how easy operating systems could breakdown due toavariety of reasons, however it's still hard to choose one that really does its job well.
RegSeeker is the kind of tool that can help you deal with Windows Registry errors, basically the main things that slow down the operating system. Since it'sapretty old application, the
Connection Keeper isasimple utility that can avoid Internet disconnection due to inactivity by simulating browsing activities. Especially designed for dial-up users, this application takes the necessary actions to keep your connection active.
The tabbed-based interface offers you quick access to options and allows you to easily configure the program settings. Here, you can specify the number of hours you want the
Posted by Linn Ko at 2:16 PM No comments:
ဒီ တစ်ပတ် အတွင်း Softpedia ဆိုတယ့် Website ထဲက Download အများဆုံး PC Software တွေပါ...
ဒီမှာ လေ့လာ နိုင်ပြီး တကယ်လို့ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Download လုပ်နိုင်သလို အခြားလိုအပ်တယ့်
Software တွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း. ရှာပြီးတော့ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်...စုံလည်း စုံသလို....
သုံးလို့ကောင်းတယ့် အရာတွေလည်း အများကြီးပါ...
Posted by Linn Ko at 11:18 AM No comments:
Samsung Firmware တွေ လိုချင်ပါတယ် ဆိုသူတွေ အတွက်ပါ....ကျွန်တော် ပေးထားတယ့် Site လေး
ကနေပြီးတော့ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်...Samsung Firmware အတော်ကို စုံနေအောင် ရှိပါတယ်....
အခု ကျွန်တော့် Website ကို လာလည်တယ့် သူတွေ အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်
ကျေနပ်ပါတယ်လို့ ... :)
Posted by Linn Ko at 10:43 AM No comments: